कसरी Google एनालिटिक्स मा एक प्रयोगकर्ता जोड्ने Martech Zone
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
यो तपाईंको सफ्टवेयरको साथ केही उपयोगिता मुद्दाहरूमा इ point्गित गर्दछ जब तपाईं अर्को प्रयोगकर्ता थप्ने जत्तिकै सरल गर्न सक्नुहुन्न… आह, तर त्यो हामी सबैलाई प्रेम गर्छौं। Google विश्लेषण। म वास्तवमा यो पोस्ट हाम्रो ग्राहकहरूको लागि लेख्दै छु ताकि तिनीहरूले हामीलाई प्रयोगकर्ताको रूपमा थप्न सक्नेछन्। यद्यपि प्रयोगकर्ता थप्नु सब भन्दा सजिलो काम होइन।
पहिले, तपाईलाई प्रशासनमा जानु पर्छ, जुन गुगल एनालिटिक्स नेभिगेशन स्क्रिनको तल बायाँ सारियो।
यो तपाइँको खाताहरु को लागी एक पूर्ण नेभिगेसन स्क्रिनमा ल्याउनेछ। सम्पत्ती चयन गर्नुहोस् जुन तपाई प्रयोगकर्तालाई थप्न चाहानुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन.
यसले सबै प्रयोगकर्ताहरूको सूचीको साथ साइडबार पप अप गर्दछ। यदि तपाईं माथि दायाँमा निलो प्लस साइन क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ अतिरिक्त प्रयोगकर्ताहरू र उनीहरूको अनुमतिहरू सेट गर्नुहोस्.
यदि तपाईं कसैलाई वेबमास्टर र गुगल एनालिटिक्स प्रबन्ध गर्नका लागि जोड्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सबै अनुमतिहरू सक्षम पार्नु पर्छ। म वैकल्पिक चेकबक्स पनि जाँच गर्दछु उनीहरूलाई सूचित गर्न कि उनीहरूसँग अब पहुँच छ।
यहाँ गुगलबाट एक सिंहावलोकन भिडियो छ जुन हास्यास्पद रूपमा लामो दिइएको छ यो मात्र केही मुट्ठी क्लिकहरू छन्।
टैग: Google विश्लेषणगुगल एनालिटिक्स प्रयोगकर्तागुगल एनालिटिक्स प्रयोगकर्ता अनुमतिगुगल ट्याग प्रबन्धकगुगल वेबमास्टरहरूGoogle +कसरीप्रयोगकर्ता व्यवस्थापन
भर्चुअल कार्यालय सहायक
अप्रिल 13, 2011 मा 4: 26 एएम
हामी साना व्यवसाय मालिकहरूको लागि भर्चुअल सहायक सेवाहरू गरिरहेका छौं। हामीले भ्रमणको संख्या, आगन्तुकहरूको संख्याको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्न सुरु गरेका छौं। उपयोगी जानकारी साझा गर्नका लागि धन्यबाद। यद्यपि तपाईले आफ्नो ग्राहकहरु मध्ये एउटाको लागि यो लेख्नु भएको छ यो हाम्रोलागी अधिक उपयोगी छ।
डिसेम्बर १, २०१ 17 2012:२:5 अपराह्न
के म प्रश्न सोध्न सक्छु? यदि त्यहाँ चयन गर्न कुनै प्रोफाइलहरू छैनन् भने म के गर्न सक्छु? त्यहाँ कुनै प्रोफाइलहरू उपलब्ध छैनन्, त्यसकारण हामी वेबसाइटको खातामा तपाईंलाई नयाँ प्रयोगकर्ता थप्न सक्दैनौं। के तपाईंलाई थाहा छ किन हामी बायाँ स्तम्भबाट दायाँ स्तम्भमा प्रोफाइल थप्न सक्दैनौं?